नेपालमा किन कोरोनाको संक्रमण कम देखियो ? न्युयोर्क इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले दियो यस्तो रिपार्ट - Mitho Khabar
नेपालमा किन कोरोनाको संक्रमण कम देखियो ? न्युयोर्क इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले दियो यस्तो रिपार्ट
April 5, 2020 mithokhabarLeaveaComment on नेपालमा किन कोरोनाको संक्रमण कम देखियो ? न्युयोर्क इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले दियो यस्तो रिपार्ट
काठमाडौं – नेपालमा किन कोरोनाभाइरस नफैलिएको होला ? यस विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन भइरहेको छ ।
एउटा अध्ययनले क्षयरोगको खोप अनिवार्य गरिएका मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या तुलनात्मक रुपमा कम रहेको देखाएको छ । प्रकाशित नभएका मेडिकल रिसर्चको साइट मेडआरएक्सआईभीका अनुसार क्षयरोगका लागि बीसीजी खोप दिइने मुलुकमा कोभिड १९ का संक्रमित र मृतकको संख्या पनि कम देखिएको हो ।
द साउथ चाइना मर्निङ पोष्टका अनुसार, अहिले यो परीक्षण केवल छ मुलुकमा मात्र गरिएको छ । तर, छ मुलुकमा गरिएको यो अनुसन्धानले पनि महत्वपूर्ण नतिजा भने दिएको छ । यी मुलुकमा बीसीजी खोप दिएका स्वास्थ्यकर्मी र वृद्ध मानिसमा पनि कोभिड १९ विरुद्धको प्रतिरक्षा प्रणाली एकै किसिमको पाइएको थियो ।
न्युयोर्क इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका सहायक प्राध्यापक गोन्जालो ओटाजुले जापानमा मृतकको संख्या कम देखिएसँगै यस विषयमा आफ्नो शोध सुरु गरेका थिए । चीनपछि सबैभन्दा पहिला जापानमा यो भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो ।
साथै जापानले अन्य मुलुकले जस्तो लकडाउनलगायतका निर्णय पनि गरेको छैन । जापानमा वृद्ध मानिसहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ । कोभिड १९ को असर धेरै वृद्ध मानिसमा हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
ओटाजु आफूलाई यसअघि नै बीसीजी खोपले केवल क्षयरोगको ब्याक्टेरिया मात्र नभई अन्य संक्रामक रोगका जीवाणुलाई पनि रोक्ने क्षमता बढाउने आफूलाई थाहा भएको बताउँछन् ।
यससँगै उनको टोलीले अनिवार्य क्षयरोगको खोप भएका र केही स्थानमा मात्र यो खोप लगाइने मुलुकको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । यसरी संकलन गरिएको तथ्यांक उनीहरुले गरेको शोधमा निकै मेल खायो ।
अमेरिका र इटालीजस्ता उच्च आम्दानी भएका मुलुकहरुमा अहिले धेरै कोभिड १९ का बिरामी देखिएका छन् । यी मुलुकमा बीसीजीको खोप जोखिममा रहेका मानिसलाई मात्र अनिवार्य गरिएको छ ।
जब कि, जर्मनी, स्पेन, फ्रान्स, इरान र बेलायतमा बीसीजी खोप अनिवार्य गर्ने नीति थियो । तर, यो चार दशकभन्दा पहिला नै रोकिएको थियो । यो भाइरसको सुरुवात भएको चीनमा पनि बीसीजी खोपको व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था सन् १९७६ भन्दा अघि राम्रो थिएन ।
दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता बीसीजी खोप अनिवार्य भएका मुलुक अहिले कोभिड १९ नियन्त्रणमा सफल देखिएका छन् ।
कोभिड–१९ मा बीसीजी खोपको प्रभावकारिताको विषयमा सबैभन्दा पहिला मिहाइ नेटीको टोलीले गरेको थियो । उनी राडबाउड यूनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरका संक्रामक रोग विशेषज्ञ हुन् ।
उनको टोलीले चार सय स्वास्थ्य कर्मचारीलाई अनुसन्धानमा समावेश गरेको थियो । जसमा दुई सयलाई बीसीजी खोप दिइएको थियो । उनलाई दुई महिनासम्म कुनै नतिजा नआउने अपेक्षा थियो ।
उनी ६० वर्षभन्दा माथिका मानिसमा बीसीजी खोपको प्रभावको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छन् । अन्य केही परीक्षण अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, बेलायत र अमेरिकामा गरिएको थियो ।
अहिले वैज्ञानिकहरु कोरोना भाइरसविरुद्ध क्षयरोगको खोप मात्र किन प्रभावकारी देखियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
नेटीले बीसीजी खोपले एकै किसिमले आक्रमण गर्ने अन्य रोगबाट पनि बचाउन सक्छ भन्नेबारे लामो समयसम्म अनुसन्धान गरेका छन् । यस्ता रोगबाट बच्न यो खोप लिएका मानिससँग अन्य मानिसको तुलनामा धेरै प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ ।
बीसीजी खोप कोभिड–१९ को लागि केही प्रभावकारी देखिएपछि यो खोप लिइहाल्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । ओटाजु यो खोप ट्वाइलेट पेपरजस्तो बिक्री गर्नुपर्ने खोप नरहेको बताउँछन् ।
वैज्ञानिकहरुले मेडिकल परीक्षण विना यो खोप कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनन् । उनीहरुको नतिजाले यो खोप कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा देखाउँनेछ । कुनै पनि संक्रमितको उपचारका लागि यो खोपमात्र उपचार हुनसक्दैन ।
ओटाजु भन्छन्, ‘बीसीजी खोपको कारण मात्र कोभिड १९ लाई नियन्त्रण गर्नसक्ने कुनै मुलुक छैनन् ।’ कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि सामाजिक दुरी बढाउने, परीक्षण बढाउने र संक्रमितहरुलाई आइसोलेसनमा राख्नु जरुरी हुन्छ ।
नेपालमा अनिवार्य रुपमा विसिजी खोल लगाइने गरिएको छ । उक्त खोजलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा पनि कोरोनाको प्रकोप फैलिनमा रोकेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।
कहिलेबाट रोकिएला कोरोनाको महामारी ? वैज्ञानिकले गरे फेरी यस्तो दाबी
अभिनेत्री श्वेता खड्काको यो नखुलेको र,हस्य
पानीबाट पनि सर्छ कि कोरोना? यसो भन्छन् विज्ञ
अस्पताल प्रशासन सामु व्यवसायी निरिह
जान्नुहोस् ; आज कार्तिक ०७ गते शुक्रवार को, राशिअनुसार तपाईंको भाग्य !
खुशीको खबर : कक्षा १२ को परीक्षा मिति तय, (तालिकासहित)
एक वर्षमा ५ दिनसम्म कपडा लगाउँदैनन् महिला ! कारण सुन्दै अचम्म लाग्दो
चाडपर्व भएता पनि काठमाडौं उपत्यका छाड्ने यात्रु घटे,कारण यस्तो !
नाच्दा नाज्दै उत्तेजित भए पछि यस्तो सम्म गरे( हेर्नुस भिडियो )
देशभर संकटकाल र कर्फ्यु लाग्ने सूचना बारे गृह मन्त्रालयले मुख खोल्यो,यस्तो रहेछ यथार्थ,भर्खर आयो यस्तो खबर
सुरु भयो ‘ए मेरो हजुर ४’को छायांकन
मनै लोभ्याउने मुना गौचनको बोल्ड अवतार हेर्नुहोस तस्बिरहरु
विश्वभर २४ घण्टामा ४ लाख ३४ हजारमा संक्रमण
कोरोनाका कारण ३७ हप्ताको गर्भवतीको निधन
खुसिको खबर आज एकैदिन यति धेरैले कोरोना जितेर घर फर्के,
दुखद खबर आज एकैदिन कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्मकै धेरैको ज्यान गयो,